Mushahaarka ayaa ah sababta boolisku shaqada uga tago - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliska oo mushahaarka ka cabanaya. sawir: Johan Nilsson/TT
Mushahaarka ayaa ah sababta boolisku shaqada uga tago
La daabacay onsdag 1 november 2017 kl 09.51
Boolis badan ayaa aaminsan in mushahaarku yahay waxa ugu muhiimsan ee ay u baahan yihiin si ay shaqadooda u sii joogaan. Arrintan ayaa lagu ogaaday baadhitaan ay ka jawaabeen in ka badan 2100 askarta booliska ah.
64 boqolkiiba booliska ka qeeyb qaatay baadhitaankan ayaa sheegay in mushaaharka oo loo kordhiyaa yahay waxa ugu weeyn ee ku qancin kara in ay sii ahaadaan boolis.
Jon Metz oo ah boolis ka hawgala magaalada Stockholm ayaa sheegay in mushahaarka hooseeya ee booliska yahay wax booliska niyad jebinaya.
-Mushahaarku waa waxa aan inta badan ka hadalno. Dabcan waan ka xun nahay booliska dhibaatadu ku dhacday. Balse mushahaarka hooseya ayaa ah waxa aan inta badan ka hadalo.
Booliska shaqada bilaaba waxa mushahaadkoodu yahay 25000 kr. Isku celcelis mushahaadka booliska waa 32 000. Balse dadka ka jawaabay baadhitaankan waxa ay badankoodu sheegay in mushahaadkoodu ka hooseeyo 27 000 kr.
Lena Nitz oo ah afhayeenka ururka shaqaalaha ee booliska ayaa sheegtay in boolis badan shaqada ka tegayaan si ay mushahaar ka sareeya kan booliska meel kale uga helaan.
- Mushahaarka booliska waxa uu dhowr kun oo kronor ka hooseeyaa isku ceceliska mushahaarka dadka haayaddaha dawliga ah ka shaqeeya. Dabcan markaas shaqada boolisku ma noqonnayso mid soo jiidasho leh. Boolisku waxay iskaga tegeyaan shaqada waxaanay helayaan shaqooyinka ka mushahaar sareeya booliska.
Tirada booliska ah ee shaqada ka tegayaa ayaa kordhaysa mudooyinkii ugu danbeeyey inkasta oo dib u habeeyn lagu sameeyey haayadda booliska. 275 oo qof ayaa ka tegey shaqada booliska sanadkii 2015, halka 409 boolis ay ka tageen shaqada sanadkii 2016. Howsha oo ku badatay booliska iyo tirada booliska oo yar ayaa ayana ah qodobadka kale ee boolisku ka cabanayo.